သူ့ကိုစွန့်ခွါထွက်ပြေးကြသည် အကျဉ်းချုပ် | They Forsook Him and Fled | Real Conversion
မတ်လ ( ၄ ) ရက်၊ သခင်ဘုရား၏နေ့ ညနေပိုင်းတွင်
"ထိုအကြောင်းအရာမူကား၊ အနာဂတ္တိကျမ်းစာပြည့်စုံမည်အ ကြောင်းတည်းဟု လူအစုအဝေးတို့ကို မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအ ခါ တပည့်တော်အပေါင်းတို့သည် ကိုယ်တော်ကို စွန့်ပစ်၍ ပြေးကြ၏။" ( မဿဲ ၂၆း ၅၆ )
ယေရှုသည် ဂေသရှေမာန်ဥယျာဉ်၌ တစ်ဦးတည်း ဆုတောင်းခြင်းအမှုကို အဆုံးသတ် ခဲ့ပါသည်။ သူသည် အိပ်ပျော်လျက်ရှိသောတပည့်တော်များကို နှိုးထားသည်။ သူက "ထပါ။ သွားကြပါစို့။ သူတပါးလက်သို့ ငါ့ကိုအပ်ရန် အချိန်ရောက်ပြီ" ( မဿဲ ၂၆း ၄၆ ) ဟု မိန့်မူခဲ့ပါ သည်။ ထို့နောက် ယုဒရှာကာယုတ်သည် "ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့်အကြီးအကဲ့များနှင့် ထားကို ကိုင်ဆောင်လျက် လူများစွာတို့ကို ဦးဆောင်ကာ" ( မဿဲ ၂၆း ၄၇ ) လာခဲ့သည်။
တပည့်တော်များအားလုံးသည် ဂေသရှေမာန်၏အမှောင်ထုကို ကြိုက်နှစ်သက်နေပုံရ ပါသည်။ ယုဒက ဗိမာန်တော်စောင့်တို့အား "ကျွန်ုပ်နမ်းသောသူကို ဖမ်းဆီးကြပါ" ( မဿဲ ၂၆း ၄၈ ) ဟုဆိုသည်။ ယုဒသည် ယေရှု၏ပါးပြင်ကို နမ်းရှုပ်လိုက်သည်။ "ထို့နောက် သူတို့သည် လာ၍ ယေရှုကို ဖမ်းဆီးကြသည်။" ( မဿဲ ၂၆း ၅၀ ) "ရှိမုန်ပေတရုသည် ထားအိမ်မှထားကိုယူ ၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်၏အစေခံ၏နားကို ခုတ်လိုက်သည်။ အစေခံ၏နာမည်မှာ မာကဖြစ်သည်။" ( ယောဟန် ၁၈း ၁၀ ) ယေရှုသည် "နားကိုကိုင်၍ အနာကို ငြိမ်းစေသည်။" ( လုကာ ၂၂း ၅၁ ) ထို့နောက် ယေရှုက ပေတရုအား ထားကို ပြန်သိမ်းရန် မိန့်မှာသည်။ ယေရှုက "ယခုပင် ငါ့အ ဘကို ငါတောင်းနိုင်သည်ကို၎င်း၊ တောင်းလျှင် ကောင်းကင်တမန် တဆယ့်နှစ်တပ်မ( ကောင်း ကင်တမန် ၇၂၀၀၀ ပါး ) က ငါ့ထံ သို့စေလွှတ်တော်မူမည်ကို၎င်း၊ သင်သည် မထင်သလော။ သို့ဖြစ်လျှင် ဤသို့သောအမှုအရာတို့သည် ဖြစ်ရမည်ဟူသော ကျမ်းစာချက်သည် အဘယ်သို့ ပြည့်စုံအံ့နည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။" ( မဿဲ ၂၆း ၅၃- ၅၄ ) ထို့နောက် ယေရှုသည် ၎င်းအား ဖမ်း ဆီးမည့်သူများဆီသို့လှည့်၍ "သင်တို့သည် ထားပြကိုဖမ်းသကဲ့သို့ ငါ့ကိုဘမ်းအံ့သောငှါ ထား နှင့်ဒုတ်များကို လက်စွဲလျက် လာကြသည်တကား။ ငါသည် ဗိမာန်တော်၌ နေ့တိုင်းဆုံးမဩဝါဒ ပေးလျက် သင်တို့အလယ်၌ထိုင်နေစဉ်အခါ၊ သင်တို့သည် ငါ့ကို မဘမ်းဆီးကြ" ( မဿဲ ၂၆း ၅၅ ) ဟု မိန့်ဆိုသည်။ ဤအချက်က ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေပြုကျမ်းဆီသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပါသည်။
"ထိုအကြောင်းအရာမူကား၊အနာဂတ္တိကျမ်းစာပြည့်စုံမည်အကြောင်းတည်းဟု လူအစုအဝေးတို့ကို မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါ တပည့် တော်အပေါင်းတို့သည် ကိုယ်တော်ကို စွန့်ပစ်၍ ပြေးကြ၏။" ( မဿဲ ၂၆း ၅၆ )
ဤအကြောင်းအရာအဖြစ်အပျက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပရောဖက်များက လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း တစ်ရာကျော်ကတည်းက ဖော်ပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာ R. C. H. Lenski က "ဤအရာအားလုံးသည် တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းအရာအတွက် ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရပါသည်။ ၎င်းမှာ သမ္မာကျမ်းစာထဲက ပရောဖက်တို့၏စကားကို ပြည့်စုံစေရန်ဖြစ်သည်။ ဤညတွင်ဖြစ် ပျက်သောအရာထဲက စစ်မှန်သောတွန်းအားတစ်ခုရှိပါသည်။ ၎င်းမှာ ဘုရားသခင်သည် ၎င်း၏ ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုစေသော အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုသည် ချုပ်နှောင်ဖမ်းဆီးမည့်သူများလက်သို့ မိမိကိုယ်ကို ဆန္ဒအလျောက်အပ်နှံခဲ့ပါ သည်။ ယခု၌သာ အပိုဒ်ငယ် ၅၆ သည် ပြည့်စုံလျက်ရှိပါသည်။ ယေရှုသည် ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံ စဉ်တွင်တပည့်တော်များသည် ထွက်ပြေးကုန်ကြသည်။" (R. C. H. Lenski, Ph.D., The Interpretation of St. Matthew’s Gospel, Augsburg Publishing House, 1964 ထုတ်၊ စာ- ၁၀၅၅၊ မဿဲ ၂၆း ၅၆ မှတ်စု )
ဤတရားဒေသနာတွင် ဤကျမ်းပိုဒ်ကို အလေးအနက်ထားပြီး တပည့်တော်များက "သူ့ကိုစွန့်ပစ်ပြီးထွက်ပြေး" ရသည့်အကြောင်းအရင်းအချို့ကို တင်ပြလိုပါသည်။ ဒေါက်တာ George Ricker Berry ၏အဆိုအရ၊ KJV ကျမ်းစာ၌ "စွန့်ပစ်ခဲ့သည်" ဟု ဘာသာပြန်ဆိုထား သော ဂရိစကားလုံးသည် "စွန့်ပယ်သည်" ဟုဆိုလိုသည်။ (A Greek-English Lexicon and New Testament Synonyms) တပည့်တော်များက ယေရှုကို စွန့်ပစ်ခဲ့ရသည့်အကြောင်းရင်း များစွာရှိပါသည်။
၁။	ပထမအချက်၊ သူတို့သည် သမ္မာကျမ်းစာထဲက ပရောဖက်ပြုချက်များ ပြည့် စုံစေရန် ယေရှုကိုစွန့်ပယ်၍ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေပြုကျမ်းက "ဤအမှုအရာအားလုံးသည် ပရောဖက်ပြုချက်ပြည့်စုံစေ ခြင်းအလို့ငှါဖြစ်သည်" ဟုဆိုပါသည်။ ထိုအချက်၌ တပည့်တော်များသည် သူ့ကိုစွန့်ပယ်ပြီး ထွက်ပြေးကြမည်အကြောင်း ပရောဖက်ပြုချက်လည်းပါဝင်ပါသည်။ ဇာခရိ ၁၃း ၆-၇ က ဤသို့ ဆိုပါသည်။
"သင့်လက်၌ပေါ်သောဒဏ်ရာကား အဘယ်သို့နည်းဟုမေးလျှင်၊ ဤဒဏ်ရာကား၊ အကျွန်ုပ်၏အဆွေခင်ပွန်း၌ ခံရသောဒဏ်ရာဖြစ် ပါသည်ဟု ပြန်ပြောလိမ့်မည်…………သိုးထိန်းကိုရိုက်သတ်လော့။ သို့ပြုလျှင်၊ သိုးတို့သည် ကွဲလွင့်ရကြလိမ့်မည်။" ( ဇာခရိ ၁၃း ၆- ၇ )
"သိုးထိန်းကိုရိုက်နှက်၍ သိုးတို့ကို ကွဲပြားစေမည်ဟူသော စကားလုံးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒေါက်တာ Henry M. Morris က ဤသို့ဆိုသည်။
ဤကျမ်းပိုဒ်ကို မဿဲ ၂၆း ၃၁ နှင့် မာကု ၁၄း ၂၇ တွင် ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်က ကိုးကားထားသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ သိုးထိန်းကောင်းဖြစ်သော ယေရှုသည် သိုးတို့အတွက် အသက် ကိုပေးလိမ့်မည်။ ( ယောဟန် ၁၀း ၁၁ ) သို့ရာတွင် ကမ္ဘာကြီး၏ အပြောင်းအလဲအတွက် သူ့သိုးတို့သည် ခဏတာ ကွဲပြားမှုတွေရှိ ရပါမည်။ (Henry M. Morris, Ph.D., The Defender’s Study Bible, World Publishing, ၁၉၉၅ ထုတ်၊ စာ- ၉၉၃၊ ဇာခရိ ၁၃း ၇ မှတ်စု )
သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယ်တိုင်က ဇာခရိ ၁၃း ၇ တွင် တပည့်တော်များက သူ့ကိုစွန့်ခွါပြီး ထွက် ပြေးသွားကြမည်အကြောင်း ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။ မဿဲ ၂၆း ၃၁ ၌ ခရစ်တော်က ဤသို့ ဆိုပါသည်။
"ထိုအခါ ယေရှုကလည်း၊ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ထိုးထိန်းကို ငါ ရိုက်သတ်၍ သိုးတို့သည် ကွဲလွင့်ရကြလိမ့်မည်ဟု လာသည်နှင့်အ ညီ၊ ယနေ့ညတွင် သင်တို့ရှိသမျှသည် ငါ့ကြောင့် စိတ်ပျက်ကြလိမ့် မည်။" ( မဿဲ ၂၆း ၃၁ )
တမန် မာကု ၁၄း ၂၇ တွင်လည်း ဤသို့တွေ့ရပါသည်။
"ထိုအခါ ယေရှုကလည်း၊ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ သိုးထိန်းကို ငါ ရိုက်သတ်၍ သိုးတို့သည် ကွဲလွင့်ရကြလိမ့်မည်ဟု ရေးသားသည် နှင့်အညီ ယနေ့ညတွင် သင်တို့ရှိသမျှသည် ငါ့ကြောင့် စိတ်ပျက် ကြလိမ့်မည်။" ( မာကု ၁၄း ၂၇ )
တပည့်တော်တို့သည် သူ့ကိုစွန့်ခွါပြီး ထွက်ပြေးသွားရခြင်းမှာ ဇာခရိ ၁၃း ၇ ကို ပြည့်စုံစေခြင်း ပင်ဖြစ်ပါသည်။
၂။	ဒုတိယအချက်၊ သူတို့သည် ကျဆုံးသောအမျိုးအနွယ်များဖြစ်ကြသဖြင့် ယေရှုကို စွန့်ပယ်ပြီး ထွက်ပြေးခဲ့ကြသည်။
လူသားသည် ကျဆုံးသောအမျိုးအနွယ်ပင်ဖြစ်ကြသည်။ ထိုအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ က မမေ့သင့်ပေ။ သင်သည် အပြစ်သားတစ်ဦးဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သင်သည် အာဒံ၏သား၊ အပြစ်မျိုးရိုး၏အစိတ်အပိုင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုသည်။
"အပြစ်တရားသည် တယောက်သောသူအားဖြင့် ဤလောကသို့ဝင် ၍၊ အပြစ်တရားအားဖြင့် သေခြင်းတရားဝင်သည်နှင့်အညီ၊ လူအ ပေါင်းတို့သည် အပြစ်ရှိသောကြောင့် သေခြင်းသို့ရောက်ရကြ၏။" ( ရောမ ၅း ၁၂ )
ထို့ကြောင့် လူအပေါင်းတို့သည် "အပြစ်၌ သေလျက်" မွေးဖွါးလာကြသည်။ ( ဧဖက် ၂း ၅ ) သို့ ဖြစ်၍ လူအပေါင်းတို့သည် "အမျက်တော်ကို ခံရသောလူမျိုးဖြစ်ကြသည်။" ( ဧဖက် ၂း ၃ ) ဤအကြောင်းကြောင့် သင်သည္ သဘာဝအားဖြင့် အပြစ်သားတစ်ဦးဖြစ်လာသည်။ ရှိသမျှအ ပြစ်ကို မာရ်နတ်အပေါ် ပုံမချကြပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်သဘာဝမရှိလျှင် မာရ်နတ်သည် ကျွန်ု္ပ်တို့ကို ကျွန်ုပ်မပြုနိုင်ပါ။ အာဒံ၏မျိုးဆက်အားလုံးသည် အပြစ်သဘာ၀ဖြင့် မွေးဖွါးလာကြ ပါသည်။ သင်တို့သည္ ဇာတိအားဖြင့် အပြစ်သားများဖြစ်ကြသည်။ သင်တို့သည် အပြစ်သား များဖြစ်ကြသည်။
တပည့်တော်များသည်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ထက် မသာပါ။ သူတို့သည် "အမျက်တော်ကို ခံရသောသားများဖြစ်ကြပါသည်။" သူတို့သည် "အပြစ်၌သေလျက်" ရှိကြသည်။ သူတို့သည် အာဒံ၏သားများဖြစ်ကြသည်။ နယူအင်္ဂလန်ကလေးများ၏ စာအုပ်ဟောင်းလေးက ဤသို့ဆိုပါ သည်။
တပည့်တော်များ၌ "ဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်သော" ဇာတိစိတ်သဘောများရှိကြပါ သည်။ ( ရောမ ၈း ၉ ) ထို့ကြောင့် သူတို့သည် ခရစ်တော်ဟောပြောသော ဧဝံဂေလိတရားကို အချိန်တိုင်း ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသည်။ သင်တို့သည်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းပင် ဧဝံဂေလိတရားကို ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသည်။ ဒေါက်တာ J. Vernon McGee က ဤသို့ဆိုပါသည်။
[ ခရစ်တော် ] က အသေခံဖို့ ယေရုရှလင်မြို့သို့ ကြွတော်မူမည်အ ကြောင်း ငါးကြိမ်တိုင်တိုင် ပြောဆိုသည်။ (မဿဲ [ ၁၆း ၂၁]၊ ၁၇း ၁၂၊ ၁၇း ၂၂-၂၃၊ ၂၀း ၁၈- ၁၉၊ ၂၀း ၂၈ ) ဤပြင်းထန်သောညွှန် ကြားချက်ရှိသော်လည်း တပည့်တော်များသည် ထမြောက်ခြင်းမ တိုင်မှီအထိ [ ဧဝံဂေလိတရား ] ၏ သက်သေကို မဆုပ်ကိုင်နိုင်ကြ ပေ။ (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, ၁၉၈၃၊ အတွဲ ၄၊ စာ- ၉၃၊ မဿဲ ၁၆း ၂၁ မှတ်စု )
တပည့်တော်များသည် ဧဝံဂေလိတရား၏ "ထင်ရှားသောအမှတ်အသားကို အဘယ့်ကြောင့် ဆုပ်ကိုင်ထားကြသနည်း။" အဖြေမှာ ရိုးရိုးလေးပင်ဖြစ်ပါသည်။
"ငါတို့ဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရားသည် ဖုံးအုပ်လျက်ရှိလျှင်၊ ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့အားသာ ဖုံးအုပ်လျက်ရှိ၏။" ( ၂ ကော ၄း ၃ )
ယောဟန် ၂၀း ၂၂ နှင့်ပတ်သက်ပြီး ၎င်း၏မှတ်စုစာအုပ်ထဲတွင် ဒေါက်တာ McGee က တပည့်တော်များသည် ခရစ်တော်ကိုရင်ဆိုင်တွေ့ပြီး "သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို လက် ခံကြလော့" ဟူသောစကားဖြင့် သူတို့အပေါ်မှုတ်သွင်းခြင်းမပြုမှီတွင် အသစ်တဖန်မွေးဖွါးခြင်း ( အသစ်ပြုပြင်ခြင်း ) ကို မခံကြရသေးပေဟုဆိုသည်။ (J. Vernon McGee, Th.D., ၎င်း၊ စာ- ၄၉၈၊ ယောဟန် ၂၀း ၂၂ မှတ်စု) (ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်၏တရားဒေသ နာကိုဖတ်ရှုရန် ဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ။ "တပည့်တော်များ၏ကြောက်ရွံ့ခြင်း" – "ဤစကားကို သူ တို့ထံမှ ဝှက်ထားလျက်ရှိသည်။" "ပေတရု၏ပြောင်းလဲခြင်း" "ရှင်ပေတရု မိမိအပြစ်ကို သိမြင်လားခြင်း" နှင့် "ယုဒရှာကာရုတ်၏ မှားယွင်းသောနောင်တတရား"။)
"ထို့နောက် တပည့်တော်တို့သည် သူ့ကိုစွန့်ပယ်၍ ထွက်ပြေးခဲ့ကြ သည်။" ( မဿဲ ၂၆း ၅၆ )
သူတို့က မိမိတို့ကိုယ်ကို အပြစ်သားဖြစ်ကြောင်းကို သိရှိကြစေရန် ဤအရာကို သူတို့သည် ကျော်ဖြစ်သွားကြရပေမည်။ John Cagan နှင့် Emi Zabalaga တို့က သူတို့သည် ပျက်စီး သောအပြစ်သားများအဖြစ် မိမိကိုယ်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ကြသကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည္လည်း ထိုနည်းတူစွာ ပျောက်ဆုံးနေသောအပြစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းကို မြင်တွေ့ရပါမည်။
တပည့်တော်တို့သည် ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမတိုင်မှီအချိန်က အသစ်ပြု ပြင်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းကို မခံကြရသေးကြောင်းပြောဆိုခြင်းဖြင့် အဆုံးစွန်ထိရောက်နေပြီဟု လူအချို့က ဆိုကောင်းဆိုနိုင်ကြသည်။ တပည့်တော်များသည် သင်တို့နှင့်ခြားနားမှုအလျဉ်းရှိပါ သလား။ သူတို့သည် ကျွန်ုပ်နှင့်မထူးသည်ကို သိသည်။ ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်မပါဘဲ ယနေ့ညတွင် ဤနေရာ၌ ရပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ခရစ်တော်၏အသွေးတော်မပါဘဲ ကျွန်ုပ်သည် ငရဲသွားမည့် အပြစ်သားများသာဖြစ်ပေလိမ့်သည်။
သူစိမ်းဖြစ်စဉ်ခါ ယေရှုကျွန်ုပ်ကို ရွေးဝယ်ခဲ့၊
အန္တရယ်အပေါင်းမှ ကျွန်ုပ်ကို ရွေးနှုတ်ကယ်တင်၊
( "ရေသောက်မြစ်ဆီသို့လာပါ" Robert Robinson, ၁၇၃၅-၁၇၉၀ ).
ကျွန်ုပ်သည် Iain H. Murray ၏စာအုပ်ဖြစ်သည့် ဧဝံဂေလိဝါဒဟောင်း စာအုပ်ကို အားကျမိသည်။ (The Banner of Truth Trust, ၂၀၀၅ ) ။ ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းနှင့်စပ် လျဉ်းပြီး ယေဘုယျအားဖြင့်ဆိုရာတွင် Iain H. Murray က "ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းနှင့်ပတ် ၍ သမ္မာတရား၏အလင်းပေးမှုအတွက် ယနေ့တွင် အရေးတစ်ကြီးလိုအပ်မှုတစ်ခုရှိပါသည်။ ဤအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ဖြစ်သော ဆန့်ကျင်ဘက်ဝါဒများသည် သာ ၍နည်းသောအရာထောင်သောင်းမကကို တိုက်ခိုက်ရန် သန်စွမ်းလှပါသည်" (စာ- ၆၈ ) ဟု ဆို ပါသည်။ ထိုအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်ထံသို့စာရေးသားပေးပို့ပါ။ သင့်ထံက သတင်း တစ်ခုခုကို ကျွန်ုပ်ကြားလိုပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီကို ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် အဖြေပေးပါမည်။ ကျွန်ုပ် ၏ အီးမေးလ်လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net ဖြစ်ပါသည်။
"တပည့်တော်အားလုံးတို့သည် သူ့ကိုစွန့်ပယ်ပြီး ထွက်ပြေးခဲ့ကြပါ သည်။" ( မဿဲ ၂၆း ၅၆ )
သူတို့သည် ယေရှု၏အသွေးတော်အားဖြင့် ဆေးကြောခြင်းကို မခံကြရသေးပေ။ သင်သည္ ယေရှု၏အသွေးတော်အားဖြင့် ဆေးကြောခြင်းခံပြီလား။ ခံပြီလား။ ခံပြီလား။ သင်သည် ယေရှု ၏အသွေးတော်အားဖြင့် ဆေးကြောခြင်းမခံရသေးလျှင် မျှော်လင့်ချက်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
၃။ တတိယအချက်၊ သူတို့သည် ယေရှုကိုစွန့်ပယ်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြ သည်။ အကြောင်းမှာ ဤအချိန်မတိုင်မှီအထိ သူတို့သည် အပြစ်ကို အမှန်တကယ် မသိမြင်ခဲ့ကြပါ။
တပည့်တော်များသည် ၎င်းတို့၏အစွမ်းအစအပေါ်တွင် စိတ်ချမှုရှိကြသည်။ ထိုအ ကြောင်းအရာကို ခရစ်တော်သည် သေခြင်းမှထမြောက်ပြီး သူတို့၌ထင်ရှားကာ သူတို့အပေါ် မမှုသွင်းမှီအချိန်တွင် ထပ်ခါထပ်ခါ တွေ့ရပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ယေရှုက ထိုညတွင် သူ့ကို ငြင်းပယ်မည်အကြောင်း ပေတရုအား ဆိုခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အပြစ်ကိုခံစားသိမြင်စေရန် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို သူတို့သည် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရပါမည်။
"ပေတရုက၊ ကိုယ်တော်နှင့်တကွသေရသော်လည်း အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်ကို မငြင်းမပယ်ပါဟု လျှောက်ပြန်၏။ တပည့်တော်အ ပေါင်းတို့သည်လည်း ထိုနည်းတူ လျှောက်ကြ၏။" ( မဿဲ ၂၆း ၃၅ )
မည်သည့်တပည့်တော်တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ မပြောင်းလဲသေးပါ။ သင်တို့လည်း အတူတူပင် ဖြစ်ပါသည်။ သင်တို့သည် သင့်အပြစ်ကိုခံစားသိမြင်စေသည့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ခံစားသိမြင်ရမည်။ ဒေါက်တာ Martyn Lloyd-Jones က ဤသို့ဆိုသည်။
အပြစ်အကြောင်းမပါဘဲ စစ်မှန်သော ဧဝံဂေလိတရားမရှိနိုင်ပါ။ အပြစ်အကြောင်းနားလည်စေခြင်းမရှိဘဲ ဧဝံဂေလိတရားမရှိနိုင်ပါ။ ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းသည် ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းခြင်း၊ လူသားတို့၏ အပြစ်နှင့်ပြည့်နှက်ခြင်း၊ မကောင်းသောအရာနှင့်မှားယွင်းသော လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် ထာဝရအကျိုးဆက်အကြောင်းတို့ ဖြင့်စတင်ရပါမည်။ လူသား၏ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းအျွက် ခရစ် တော်ထံမှထွက်ပြေးရသည့်ဤနည်းလမ်းတွင် မိမိအပြစ်ကိုမြင် တွေ့ရန် လူကိုဆောင်ယူသည့်အရာသာဖြစ်ပါသည်။ ( ဒေါက်တာ Hymers ၏ မှတ်စုဖြစ်သည်။ အက်စတာပြဇာတ်တွင် ယုဒ၏အခန်း ကဏ္ဍကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လည်း မိမိအပြစ် ကို မြင်တွေ့လာသည်။ ) ( ဒေါက်တာ Martyn Lloyd-Jones, M.D., Studies in the Sermon on the Mount, InterVarsity, ၁၉၅၉၊ အတွဲ ၁၊ စာ- ၂၃၅၊ ကိုယ်တိုင်အလေးထားမှု )
တပည့်တော်များသည် "ယေရှုကို စွန့်ပယ်ပြီး မထွက်ပြေး" မှီအချိန်အထိ ၎င်းတို့အပြစ် ကို အစစ်အမှန် မမြင်တွေ့ရကြသေးပေ။ တပည့်တော်များက အစောနလေးက ဆိုကြသည်မှာ "ဘုရားသခင်ထံကလာသည်ကို အကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ကြပါ၏" ဟူ၍ဖြစ်သည်။
"…..ယေရှုကလည်း၊ ယခုတွင် ယုံကြည်ပြီလော။ သင်တို့သည် ကွဲ ပြား၍ ငါ့ကို တကိုယ်တည်းနေစေခြင်းငှါ စွန့်ပစ်လျက်၊ အသီးအ သီး မိမိတို့နေရာသို့ ပြေးသွားမည့်အချိန်ကာလသည်လာ၍ ယခု ပင်ရောက်ပေ၏။" ( ယောဟန် ၁၆း ၃၀-၃၂ )
ခရစ်တော်ကိုငြင်းပယ်ပြီးနောက် ပေတရု၏ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်အပြစ်ကိုမြင်တွေ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အခြားတပည့်တော်များကလည်း ခံစားနေခဲ့ကြပါသည်။ "ပေတရုသည်ထွက်သွား ၍ ငိုကြွေးခဲ့ရသည်။" ( လုကာ ၂၂း ၆၂ ) ဒေါက်တာ W. G. T. Shedd က "လူတစ်ဦးသည် အပြစ်ကိုသိမြင်ခြင်းမရှိသ၍ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က သာမန်အနေဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ လေ့မရှိပါ"ဟုဆိုသည်။ (Shedd, Dogmatic Theology, အတွဲ ၂၊ စာ- ၅၁၄ ) တပည့်တော် များသည် ယေရှုကို သစ္စာမဖောက်မှီအချိန်အထိ ၎င်းတို့အပြစ်ကို သိမြင်ခြင်းမရှိကြပေ။ ထို့ နောက် သူတို့သည် သန့်ရှင်းသောအသွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြောခြင်းခံရဖို့လိုအပ်သည်ကို သိ လာခဲ့ကြပါသည်။ သင်တို့တွင် အချို့တို့က အပြစ်ကို မမြင်ဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်သည်ဟု ယူဆခဲ့ ကြပေလိမ့်မည်။ သင်သည် ကိုယ့်အပြစ်ကိုသိမြင်ခြင်းမရှိသ၍ ဘယ်တော့မှ ပြောင်းလဲနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ပေတရုသည် ထွက်သွားပြီး ငိုကြွေးခဲ့ရသည်။ လူများစွာတို့သည် မပြောင်းလဲခင်၌ ပေတရုကဲ့သို့ ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြသည်။ မျက်ရည်မျက်ခွက်ဖြင့် ငိုကြွေးခဲ့ဖူးပါသလား။
ယခုတွင် ပြန်သွားပြီး မပြောင်းလဲသေးသောသူများအတွက် ဤအရာကို လက်တွေ့ အသုံးချရပေမည်။ သင်သည် ပျက်စီးနေသောအပြစ်သားအပြစ်လည်းကောင်း၊ သင့်စိတ်နှလုံး သည် "ယိုယွင်းပျက်စီးပြီး ဆိုးသွင်းသည်ဟူ၍လည်းကောင်း" ခံစားပါသလား။ ( ယေရမိ ၁၇း ၉ ) " အလွန်ဆိုးသွင်းသောသူ၊ ဤသေခြင်းတရားထဲက အဘယ်သူကယ်တင်မည်နည်း" ဟု ခံစားနေမိပါသလား။ ( ရောမ ၇း ၂၄ ) သင်သည် စိတ်ချမှုပျောက်ဆုံးနေပါသလား။ အပြစ်အ တွက် ငိုကြွေးမြည်တမ်းလျက်နေပါသလား။ သင်သည် အပြစ်အတွက် ငိုးကြွေးမြည်တမ်းခြင်း မပြုသ၍ မျှော်လင့်ချက်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ "ဘုရားသခင်၊ အပြစ်သား ကျွန်ု္ပ်အပေါ် မစသနား တော်မူပါ" ဟု မပြောသ၍ မျှော်လင့်ချက်မရှိပါ။ ဒေါက်တာ Lloyd-Jones က ပြောဆိုသကဲ့သို့ ""ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်ကယ်တင် ခြင်းအတွက် ခရစ်တော်ထံသို့ သင်လာမည့် ဤနည်းလမ်းတွင် အပြစ်ကို သင်မြင်ပြီး ခံစားရန် ဆောင်ယူခြင်းကို သင်ခံရသောအချိန်တွင်သာဖြစ်သည်။ ( ၎င်း )
ယေရှုနာမ၌ မိမိသဘောအတိုင်း မြင့်မြတ်သောဓမ္မတေးတစ်ပုဒ်ကို ချီးမြှင့်၊
စီးဆင်းသောသွေးတော်ထဲက သွန်းလောင်းသော အနာငြိမ်းခြင်းစမ်းချောင်း
အသွေးသွန်းလောင်းစဉ်ခံရသော အာမင်္ဂလာ အဘယ်သူပြောဆိုနိုင်၊
ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ဝန်ထုတ်သယ်ဆောင်စဉ်ခါ အဘယ်မျှလောက် ဝေဒနာပွါးများ။
နာကျင်ခြင်းထဲက ထွက်လာသော အသံမဟုတ် စိတ်နှလုံးထဲက ထွက်လာ၊
သံမှုနှင့်ရိုက်ထားဒဏ်ရာ၊ ဆူးသရဖူ၊ ဝမ်းအနည်းရဆုံးသောအရာကိုကိုဖြစ်စေ။
သူ့စိတ်ဝိညာဉ်၌ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ဒဏ်ရာအဘယ်မျှ လေးလံတော်မူမည်နည်း။
( "သူ့အပေါ်တင်တော်မူသည်" William Hiley Bathurst, ၁၇၉၆-၁၈၇၇;
"အံ့ဘွယ်ကျေးဇူးတော်." သံဇဉ်ဖြင့် )
နိုးထမှုဖြစ်စဉ်အခါ တရုတ်နိုင်ငံ၌ လုပ်ဆောင်ကြသကဲ့သို့ သင်တို့သည် ငိုးကြွေးမြည်တမ်း လျက် စစ်မှန်သောမျက်ရည်ဖြင့် ငိုကြွေးရလောက်အောင် အပြစ်ကို ခံစားရပေလိမ့်မည်။
ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးပြောဆို၍ ရနိုင်အောင် ပထမခုံတမ်းနှစ်ခုဆီသို့ လာ၍ ခဏထိုင်ပါ။ သင်တို့သည် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ လာကြသော် လည်း သင်တို့တွင် အများက ကောင်းကောင်း မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါ။ သင်တို့သည် ပျောက် ဆုံးသောအပြစ်သားတစ်ဦးအနေဖြင့်သာ ဤနေရာမှ ထွက်ခွါသွားပေမည်။ ဤနေရာသို့လာရန် အဘယ့်ကြောင့် အကူအညီ မပေးနိုင်ပါသနည်း။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သင်က ပျောက်ဆုံး သူအနေဖြင့် မခံစားသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တို့သည် တပည့်တော်များကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ပါ သည်။ သင့်စိတ်နှလုံးထဲတွင် စိတ်ချမှုကြီးရှိသည်။ သင်သည် မိမိအသက်တာကို သင်ဖြစ်သည် အတိုင်း ခရစ်ယာန်အနေဖြင့် အသက်ရှင်နိုင်သည်ဟု ထင်ကောင်းထင်ပေမည်။ သို့ဆိုလျှင် မှား ပေမည်။ မာရ်နတ်သည် အနှေးနှင့်အမြန်လာပြီး သင့်အား သွေးဆောင်တော်မူမည်။ တပည့် တော်များလုပ်ဆောင်သကဲ့သို့ တိတိကျကျလုပ်ဆောင်ပေလိမ့်မည်။ သင်သည် ခရစ်တော်ကို စွန့်ခွါသွားမည်။ အသင်းတော်ကိုလည်း စွန့်ခွါသွားမည်။ သင်သည် အပြစ်ရှိသောအသက်တာ ဖြင့် အသက်ရှင်သန်ရမည်။ အဘယ်သို့သိနိုင်မည်နည်း။ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်သည် နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော် တရားဟောခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သင်တို့ကဲ့သို့ ရာပေါင်းများစွာသောသူတို့ကို မြင်တွေ့ခဲ့ ပြီးဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် ထိုညတွင် တပည့်တော်များကဲ့သို့ ခရစ်တော်ကို သင်သည် စွန့်ခွါပေလိမ့်မည်။ သင်သည် အနှေးနှင့်အမြန် ထိုနည်းအတိုင်း ပြုလိမ့်မည်။ ထိုသို့မလုပ်ဟု ထင်ကောင်းထင်ပေမည်။ သို့သော် မှားပေလိမ့်မည်။ ရိုးသားမှုရှိပါ။ အသင်းတော်စွန့်ခွါခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး သင်စဉ်းစားပြီးသားဖြစ်ပေမည်။ ရိုးသားမှုရှိပါ။ သင်သည် အသင်းတော်စွန့်ခွါခြင်း အကြောင်း စဉ်းစားပြီးမဟုတ်ပေဘူးလား။ မဟုတ်ဘူးလား။ မဟုတ်ဘူးလား။ သင်လုပ်ဆောင် သည်ကို သင်သိပါသည္။
သင်သည် မိမိစိတ်နှလုံးကို ကြည့်ရှုရပါမည်။ သင့်အပြစ်ကို ခံစားရမည်။ ယေရှုခရစ်၌ ယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်သည်ကို ခံစားရမည်။ သင်သည် ပျောက်ဆုံးသောအပြစ်သားဖြစ်သည်ကို ခံစားရမည်။ အပြစ်၊ ယေရှုကို အားကိုအားထားမပြုလိုသောအပြစ်ကို ခံစားရမည်။ ၎င်းသည် အပြစ်ထဲတွင် အကြီးမားဆုံးအပြစ်သည် ယေရှုကို မယုံကြည်ခြင်းအပြစ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှု က "ငါ့ကို မယုံကြည်သောသူသည် အပြစ်စီရင်ခြင်းကို ယခုပင်ခံလျက်ရှိသည်" ဟုမိန့်ဆိုပါ သည်။ ( ယောဟန် ၃း ၁၈ ) သင်သည် ငရဲရောက်သည်အထိ စောင့်နေစရာ မလိုအပ်ပါ။ အပြစ် စီရင်ခြင်းကို ခံနှင့်ပြီးသားဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာ Lloyd-Jones က "ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်ကယ်တင် ခြင်းအတွက် ခရစ်တော်ထံသို့ [ သင်လာမည့် ] ဤနည်းလမ်းတွင် အပြစ်ကို သင်မြင်ပြီး [ ခံစား ] ရန် ဆောင်ယူခြင်းကို [ သင်ခံရသောအချိန် ] တွင်သာဖြစ်သည်" ဟုဆိုသည်။ သင္႔အပြစ် ကို သင်ခံစားပါသလား။ သင့်အပြစ်ကို ခံစားလျှင် သင့်ကို လေးလံစေမည်။ ထို့နောက် ခရစ်တော် ထံသို့လာပြီး သူ့ကို ယုံကြည်ကိုးစားသဖြင့် သူ့အားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်မည်။ သင့်အပြစ်အတွက် သွန်းလောင်းသောအသွေးတော်အားဖြင့် ဆေးကြောခြင်းကို ခံရမည်။ သင် သည် အမှန်တကယ် ပြောင်းလဲပြီး ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရန် အခြားသောနည်းလမ်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်အကြောင်းသာ မဟောလျှင် တနင်္ဂနွေနေ့လည်း ဖြစ် လာစရာအကြောင်းမရှိမည်အကြောင်း ဆုတောင်းပါသည်။ ယေရှုကိုယုံကြည်ကိုးစားသဖြင့် ဆေးကြောခြင်းခံရမည် ဟူသော ဧဝံဂေလိတရားမှတပါး အခြားသောတရားမရှိပေ။ ကာလနီ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် သွန်းလောင်းသော ယေရှု၏အသွေးတော်သည် သင့်၏ တစ်ခုတည်း သော မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် သင်သည် ယေရှု သို့မဟုတ် အသွေးတော်အ ကြောင်းကို လုံး၀ ဖေါ်ပြလေ့မရှိပါ။ အကြောင်းမှာ သင်သည် အပြစ်ကို မခံစားသောကြောင့် သာဖြစ်ပါသည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့်သာဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့်သာဖြစ်သည်။ ထို အကြောင်း ကြောင့်သာဖြစ်သည်။ သင်သည် မှန်ကန်သောစကားကို သင်ယူလေ့လာရန် ကြိုး စားအားထုတ်နေပါသည်။ အို၊ တကယ် မိုက်သောသူပါတကား။ ဩဂတ်စတင်းက "ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်နှလုံးသည် ကိုယ်တော်၌ ငြိမ်းချမ်းရာမတွေ့မချင်း သက်သာရာမရပေ" ဟုဆိုသည်။ အသွေးနှင့်ပြည့်သောတွင်းရှိသည်။ ကယ်တင်ရှင်၏အသွေးတော်နှင့်နီးစေပါ တို့ရှိပါသည်။ အောက်အရပ်သို့ရောက်နေသော အပြစ်သား ယေရှုထံသို့ယခုလာပါ။ သန့်ရှင်းသောအသွေး တော်ဖြင့် အပြစ်မှ ဆေးကြောပေးမူမည်။ အာမင်။
"တစ်ခုတည်း"၊( Ben H. Price, ၁၉၁၄ ရေးစပ်ပါ သည်။ )
( မဿဲ ၂၆း ၄၆၊ ၄၇၊ ၄၈၊ ၅၀၊ ယော ၁၈း ၁၀၊ လုကာ ၂၂း ၅၁၊ မဿဲ ၂၆း ၅၃-၅၄၊ ၅၅ )
၁။	ပထမအချက်၊ သူတို့သည် သမ္မာကျမ်းစာထဲက ပရောဖက်ပြုချက်များ ပြည့် စုံစေရန် ယေရှုကိုစွန့်ပယ်၍ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြသည်။ ဇာခရိ ၁၃း ၆- ၇၊ မဿဲ ၂၆း ၃၁၊ မာကု ၁၄း ၂၇။
၂။	ဒုတိယအချက်၊ သူတို့သည် ကျဆုံးသောအမျိုးအနွယ်များ ဖြစ်ကြသဖြင့် ယေရှုကို စွန့်ပယ်ပြီး ထွက်ပြေးခဲ့ကြသည်။ ရောမ ၅း ၁၂၊ ဧဖက် ၂း ၅၊ ၃၊ ရောမ ၈း ၇၊ ၂ ကော ၄း ၃။
၃။ တတိယအချက်၊ သူတို့သည် ယေရှုကိုစွန့်ပယ်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြ သည်။ အကြောင်းမှာ ဤအချိန်မတိုင်မှီအထိ သူတို့သည် အပြစ်ကို အမှန်တ ကယ် မသိမြင်ခဲ့ကြပါ။ မဿဲ ၂၆း ၃၅၊ ယော ၁၆း ၃၀- ၃၂၊ လုကာ ၂၂း ၆၂၊ ယေရမိ ၁၇း ၉၊ ရောမ ၇း ၂၄၊ ယောဟန် ၃း ၁၈။